Umkhiqizi kanye neFektri Engcono Kakhulu ye-TPU | Yilibao
Okungeyona into enobuthi ne-eco-friendly: Umshini wokugoqa we-TPU wenziwe nge-TPU okuyinto ephephile, e-eco-friendly futhi engeyona enobuthi enganeni.
cishe u-6 kg / ucezu
1. Ububanzi obubanzi bokuqina: Ngokushintsha isilinganiso sento ngayinye yokuphendula ye-TPU, imikhiqizo enobulukhuni obuhlukile ingatholwa, futhi njengoba ubulukhuni bukhula, umkhiqizo usagcina ukuqina okuhle nokugqoka ukumelana.
2. Amandla amakhulu emishini: Imikhiqizo ye-TPU inamandla amahle kakhulu wokuthwala umthwalo, ukumelana nomthelela nokusebenza kokumunca ukushaqeka.
3. Ukumelana okuhle kakhulu ngamakhaza: I-TPU inezinga lokushisa lengilazi eliphansi futhi isagcina ukuqina okuhle, ukuguquguquka nezinye izinto zomzimba ngama-degree angu-35.
4. Ukusebenza okuhle kokucubungula: I-TPU ingacutshungulwa ngezindlela ezijwayelekile zokucubungula izinto ze-thermoplastic, ezinjengokubumba umjovo, i-extrusion, ne-calendering. Ngasikhathi sinye, i-TPU ingacutshungulwa ngamaphesenti aphezulu wezinto zokwakha ukuthola ama-polymer alloys anezici ezihambisanayo.
Inkampani ixhasa ifilosofi yokuthi "Yiba nguNombolo 1 ngekhwalithi ephezulu, isuselwe ekulinganisweni kwesikweletu nasekuthembekeni kokukhula", izoqhubeka nokusebenzela abathengi abaphelelwe yisikhathi nabasha abasuka ekhaya naphesheya kwezilwandle ngokuphelele ngamaQuots for China Baby Floor Mats for Crawling , Uma kungadingeka eminye imininingwane, khumbula ukusishayela nganoma yisiphi isikhathi!
Ama-Quots we-China Baby Play Mat ne-Play Mat amanani, Ngemuva kweminyaka ekwakheni nokuthuthuka, ngezinzuzo zamathalente afanelekile aqeqeshiwe kanye nesipiliyoni sokumaketha esicebile, impumelelo evelele yenziwa kancane kancane. Sithola idumela elihle kumakhasimende ngenxa yemikhiqizo yethu emihle nekhwalithi yesevisi yangemva kokuthengisa. Sifisa ngobuqotho ukwakha ikusasa elichumayo nelichumayo kanye nabo bonke abangane basekhaya nakwamanye amazwe!
Sebenzisa isikhwama esingalukiwe nebhokisi ukupakisha umata
Langaphambilini I-EPE Engenabuthi i-Eco-friendly Play Mat
Olandelayo: XPE amaseviyethi Mat (sicindezelwe Edge)
Tpu Baby Dlala Mat
Tpu Foam Ingane Mat
Tpu Dlala Mat